Morgan Tsvangirai - Latest news on Metro UK
Mugabe to toast victory by grabbing more assets
Robert Mugabe has hit back at claims of vote-rigging by claiming it was his pledge to seize Zimbabwe’s remaining foreign and white-owned assets that secured his election victory.
Don't expect Mugabe to change his ways
Zimbabwean PM booed over Mugabe support
The Zimbabwean prime minister Morgan Tsvangirai has defended his support of widely-criticised president Robert Mugabe.
Tsvangirai pokes fun at PM Brown
Zimbabwe's prime minister Morgan Tsvangirai has made fun of Gordon Brown's flagging political fortunes.
Zimbabwe PM Tsvangirai’s grandson dies
Morgan Tsvangirai's 4-year-old grandson has drowned less than a month after the Zimbabwe prime minister's wife was killed in a road crash.
Mugabe mourns Tsvangirai wife
President Robert Mugabe joined the mourning for Prime Minister Morgan Tsvangirai's wife on Tuesday and called on Zimbabweans to end violence and support his old rival in rebuilding the shattered country.
Church service for Zimbabwe PM’s wife
A small church service was held in Zimbabwe for the wife of Prime Minister Morgan Tsvangirai, who was killed in a car crash last week.
Tsvangirai: ‘Car crash was an accident’
Zimbabwean prime minister Morgan Tsvangirai says there was no foul play over the death of his wife in a car crash.
Tsvangirai ally on terror charge
ZIMBABWE: One of Morgan Tsvangirai's nominees to the new Zimbabwean government has been charged with terrorism by Robert Mugabe's regime.
Long-time opposition leader Morgan Tsvangirai has been sworn in as Zimbabwe prime minister, nearly a year after winning an election.
Tsvangirai prepares for office in Zimbabwe
Zimbabwe's opposition leader Morgan Tsvangirai prepared to take office as prime minister in a power share deal with President Robert Mugabe.
Tsvangirai and Mugabe agree new deal
Zimbabwe's opposition MDC agreed on Friday to join a unity government with President Robert Mugabe, party leader Morgan Tsvangirai said.
Tsvangirai agrees to deal with Mugabe
Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai has said he agrees to form a unity government with president Robert Mugabe, even though his party voiced disappointment with a deal reached at a regional summit, a South African newspaper reported on Wednesday.
Mugabe threatens to call off talks
Robert Mugabe has ruled out making any concessions when he meets opposition leader Morgan Tsvangirai for power-sharing talks today.
Zimbabwe talks to resume
Southern African leaders meet in Harare on Monday to try to salvage a power-sharing deal between President Robert Mugabe and opposition leader Morgan Tsvangirai, and rescue Zimbabwe's economy from free-fall.
Power-sharing deal in danger
Zimbabwe's opposition MDC will walk away from a power-sharing deal if new mediation efforts fail to break a deadlock over cabinet posts, the party's leader Morgan Tsvangirai said.
Zimbabwe talks to resume soon
Zimbabwean President Robert Mugabe is expected to meet opposition leader Morgan Tsvangirai in the next two days in another attempt to break a deadlock over cabinet posts, a senior ruling party official said on Monday.
Zimbabwe's President Robert Mugabe and main opposition MDC leader Morgan Tsvangirai have signed a landmark power-sharing agreement today.
Zimbabwe rivals agree power deal
Zimbabwe's opposition leader Morgan Tsvangirai and President Robert Mugabe have reached a historic power-sharing deal that could finally end Robert Mugabe's 28-year monopoly on power in the country.
New Zimbabwe crisis talks to be held
Zimbabwe power-sharing deal ‘close’
Zimbabwe negotiations in ‘deadlock’
Zimbabwe talks to begin tomorrow
Mugabe pact to get “safe exit” from power
Mugabe targets British investors